Bit By Bit - Ethics - 6.7.3 fikir anshaxa cilmi sida joogtada ah, ma Discrete
Dood ku saabsan anshaxa cilmi bulshada ee da'da digital inta badan dhacdaa marka la eego binary, tusaale ahaan, ku sadhaysan Dareenka ahaa mid anshax ama waxa aan ahaa anshaxa. Tani fikirka binary polarizes dood, caqabad ku dadaal si ay u horumariyaan xeerarka la wadaago, kor u caajisnimada caqliga, iyo absolves cilmi oo cilmi waa ku tilmaamay "anshaxa" ka mas'uuliyadda u dhaqmaan more anshaxa. The sheekada ugu wax soo saar oo aan la arki lug anshaxa cilmi ka gudbaan fikirka binary si fikrad oo joogto ah oo ku saabsan anshaxa cilmi baarista.
Dhibaato weyn oo la taaban karo oo la xidhiidha astaamaha ikhtiyaariga ah ee cilmi-baarista ayaa ah in ay ka tarjumayso doodda. Wicitaanka Fikradaha Dareenka "aan caddaalad ahayn" ayaa si wadajir ah ula jeeda jahwareer dhab ah oo aan habooneyn. Taas bedelkeeda, waa mid waxtar leh oo ku haboon inaad si gaar ah ugala hadasho dhinacyada daraasadda ee aad ku aragto dhibaato. Inaad ka fogaato luuqad feker ah oo labajibaaran iyo naxaas leh looma yeedhin si aan u adeegsanno luuqad mudan oo loola jeedo dabeecad xumo. Halkii, fikradda joogtada ah ee anshaxa, waxaan u maleynayaa, inay u horseeddo luqad taxaddar leh oo sax ah. Dheeraad ah, fikradda joogtada ah ee anshaxa cilmi-baarista waxa ay cadeyneysaa in qof kasta - xitaa cilmi-baarayaasha oo sameeya shaqo oo horeba loo tixgeliyey "anshax" -waxaa ku dadaalaya sidii loo abuuri lahaa isku dheelitirnaan anshaxeed oo dheeraad ah shaqadooda.
Faa'iido kama dambeys ah oo u socoto feker joogto ah waa in ay dhiirigeliso hoos-u-dhac maskaxeed, taas oo ku habboon wajiga caqabadaha adag. Su'aalaha cilmi-baarista ee da'da dijitu waa mid dhib badan, mana jiro qof keliya oo kalsooni buuxda u leh karti u leh inuu ogaado habka saxda ah ee ficilka.